loko [wiki ifg]
Writing /home/infogasy/domains/wiki.infogasy.net/public_html/data/cache/4/4cfef1096413d61c120b3bcb3ea1854b.xhtml failed
Zaka sy hazavana
Zava-tsoa lehibe iray nomen’ilay Nahary antsika ny loko, ary resaka hazavana no hanazavana azy.
Ny taratr’hazavana dia azo raisina ho onja elektromagnetika (misy teoria hafa mandray azy ho zaka madinika na corpusculesfa tsy mahaliana antsika). Mitopa amin’ny hafaingana C izy ao anatin’ny foana (vide), ohatr’ohatra an’izay koa anatin’ny rivotra. Araka izany dia azo faritana izy:
na amin’ny hatetika (frequence)izay refesina amin’ny Hertz (Hz)
na amin’ny halavan’onja (longueur d’onde) izay refesina amin’ny metatra (m)
Sahala ihany ireo satria hatetika = C / halavan’onja . Io hatetika na halavan’onja io no mametra ny lokon’ilay hazavana. Ny hazavana hita maso dia manana halavan’onja hatramin’ny 400nm (volomparasy violet) ka hatramin’ny 780nm (mena). Ny latsaka noho ny 400nm no ultraviolet ary ny mihoatra ny 780nm kosa no infrarouge. Ao anelanelan’ireo kosa dia mandray karazana loko maro izy, dia ireo loko hita amin’ny avana na antsiben-danitra (arc en ciel).
Atao hoe monochromatique ny hazavana tsy misy afa-tsy iray ny halavan’onjan’ny taratra rehetra (loko iray), ary polychromatique raha fitambarana taratra misy halavan’onja maromaro (loko maromaro mitambatra). Toy izany ny hazavana fotsy_ toy ny hazavan’ny masoandro, izay rehefa voazarazaran’ny piti-drano eny amin’ny rahona dia mamoaka ireo karazana loko rehetra mifandray amin’ny halavan’onjany tsirairay avy.
Rehefa mandalo velarana iray ny hazavana dia zavatra telo no mety mitranga: na voafoka izy (absorbe), na voaverina (reflechi), na mitety ilay zaka (traverse). Ny hazavana voaverina ihany no mety ho tonga any amin’ny masontsika ka ireny no mametra ny lokony. Noho izany:
mainty ny velarana iray raha tsy misy averiny ny taratr’hazavana miantefa aminy
fotsy izy raha averiny daholo ny taratr’hazavana miantefa aminy
Ny ravin-kazo dia mifoka ny taratr’hazavana rehetra afa-tsy ny maitso
Raha loharanon-kazavana indray izy dia izay hazavana alefany no tonga eny amin’ny masontsika ka mametra ny lokony.
Lazaina fa mifameno ny loko anankiroa raha ny fampifangaroana azy dia manome fotsy. Ny ohatra mivantana indrindra aloha dia ny mainty sy ny fotsy, fa raha te hahalala bebe kokoa dia mampitovia sary negatif (amin’ny pellicule) sy positif (ilay efa voasasa ambony taratasy).
RGB (Red, Green, Blue): mena, maitso, manga
Ireo no loko telo fototra fampiasa rehefa manafangaro taratr’hazavana. Marihina fa io no ampiasain’
(255,255,255): (100%,100%,100%) : fotsy
(255,0,0)    : (100%,0%,0%)     : mena
(0,255,0)    : (0%,100%,0%)     : maitso
(0,0,255)    : (0%,0%,100%)     : manga
(0,0,0)      : (0%,0%,0%)       : mainty
CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, blacK): Cyan*, Magenta*, mavo, mainty
Ireo loko telo voalohany dia mifameno amin’ireo loko fotora amin’’hazavana no ampiasaina fa ranomainty. Ilay mainty kosa dia ilaina mba hitsitsiana ireo ranomainty miloko kokoa.
Ity dia fomba hafa mihitsy hamaritana ny loko avy amin’ireo toetrany anankitelo ireo. Hazavaina kely satria tsy ahitana dikany amin’ny tenintsika:
Hue: Ny karazan’ilay loko, mety ohatra hoe mena, manga, mavo, maitso
Saturation: io dia ilazana ny fahaveloman’ilay loko. Ambany izy ho an’ireo loko vasoka
Luminance: ilazana ny famiratry ny loko.
loko.txt · Novaina farany:: 2008/09/11 12:43